VG: waxaa laga yaabaa in Ap ay SV banaanka dhigaan, si ay KRF usoo xero gashtaan - NorSom News
Home Politikk/siyaasad VG: waxaa laga yaabaa in Ap ay SV banaanka dhigaan, si ay...
VG: waxaa laga yaabaa in Ap ay SV banaanka dhigaan, si ay KRF usoo xero gashtaan
Sida uu qorayo wargeyska VG oo soo xiganayo ilo katirsan xisbiga shaqaalaha ee Ap, waxaa doorashadan dhici karto in AP ay dhabarka u jeediyaan SV, si ay dowlad wadaag ah ula dhistaan KRF. Ilaha uu VG warka kasoo xiganayo ayaa sheegay in xisbiga Ap uu diyaar u yahay in SV ay tuuraan, hadii ay taas keeneyso inay wada-shaqeyn la yeeshaan KRF.
KRF ayaa sanadkan ah xisbiga jookarka ah ee doorashada sanadkan, waxaana loo badinayaa inay Ap wada-shaqeyn la yeelan doonaan, maadaama ay ku tacab-beeleen afar sano oo ay kursiga ku hayeen Erna Solberg iyo Siv Jensen. KRF ayaa diidan la shaqeynta FRP iyo Siv Jensen.
Ap ayaa heysto sadex doorasho midkood:
Inay dhistaan dowlada ka kooban Ap, Sp iyo KRF
Inay sameystaan dowlada ka kooban Ap iyo Sp= Wey adagtahay inay dhacdo, balse waa suurtogal marka loo eego sida xowliga ah ee Sp kor ugu kacay dhowrkii bilood ee ugu danbeysay.
Ama inay sidii caadada aheyd soo celiyaan isbaheysigoodii hore ee Ap, SV iyo Sp. Hadii ay Ap intaas isku helaan, wax badan ayey u dhib-yartahay, maadaama ay horey usoo wada shaqeeyeen. Laakiin SV ayaan la isku hubin inay heli doonaan codad ku filan oo ay lasoo shirtagaan, waana mida keeneyso inay Ap wado kale sii raadsadaana ama KRF wada-hadal lasii galaan.
Si kastaba waxaa sanadkan loo badaniyaa in Erna Solberg aysan lix bilood kadib sii ahaan doonin reysulwasaare.
Previous articleShirkad uu wax ka aas-aasay ardey soomaali oo heshiis la gashay Halden Kommune
Next articleWasiirada soo galootiga denmark: Waxaan rajeyneynaa in dowlada cusub ee Soomaaliya ay nala shaqeyso